Yesaia 44 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Onyankopɔn nkurɔfo a wapaw wɔn nya nhyira (1-5)
Onyankopɔn biara nni hɔ ka Yehowa ho (6-8)
Ahoni a nnipa ayɛ yɛ adehunu (9-20)
Yehowa yɛ Israel Gyefo (21-23)
Ɔnam Kores so bɛsan akyekye ɔman no (24-28)
44 “Afei tie, O Yakob, m’akoa,Ne wo, O Israel a mapaw wo.+ 2 Nea YehowaA Ɔyɛɛ wo na Ɔnwenee wo,+Nea ɔboaa wo fii yafunu* mu no aka ni: ‘Nsuro, m’akoa Yakob,+Ne wo, Yesurun,*+ a mapaw wo. 3 Efisɛ mehwie nsu agu nea osukɔm de no* so,+Na nsuwansuwa asen asaase a awo so. Mehwie me honhom agu w’asefo* so+Na mede me nhyira agu wo nkyirimma so. 4 Wobefifi te sɛ sare momono,+Te sɛ nsuano nnua. 5 Obi bɛka sɛ: “Meyɛ Yehowa dea.”+ Na obi foforo nso afrɛ ne ho Yakob,Na ɔfoforo nso bɛkyerɛw agu ne nsa ho sɛ: “Yehowa dea.” Na ɔbɛfa Israel din ato ne ho.’ 6 Nea Yehowa,Israel Hene+ ne ne Gyefo,+ Asafo Yehowa aka ni: ‘Mene nea odi kan ne nea odi akyi.+ Onyankopɔn biara nni hɔ ka me ho.+ 7 Hena na ɔte sɛ me?+ Ma ɔmpae mu nka; ɔnka, na ɔmfa ho adanse nsi m’anim!+ Sɛnea mayɛ fi bere a mede tetefo no bae no,Momma wɔnka nneɛma a ɛrebaNe nea ɛbɛba daakye. 8 Munnsuro,Na mommmɔ hu.+ Memmaa mo mu biara ntee, na menkaa ho asɛm nkyerɛɛ mo anaa? Mone m’adansefo.+ Onyankopɔn bi wɔ hɔ ka me ho anaa? Daabi, Ɔbotan biara nni hɔ ka me ho.+ Minhuu bi.’” 9 Wɔn a wɔyɛ ahoni nyinaa yɛ nnipahunu,Na ade a wɔn ani gye ho no, mfaso biara nni so.+ Wɔyɛ wɔn adansefo, nso wonhu* biribiara, na wonnim* hwee,+Enti wɔn a wɔyɛ wɔn no ani bewu.+ 10 Hena na ɔbɛnwene onyame anaa ɔbɛyɛ dade honi*A mfaso biara nni so?+ 11 Hwɛ! Wɔn a wɔka ne ho nyinaa ani bewu!+ Wɔn a wɔyɛ ahoni no yɛ nnipa kɛkɛ. Ma wɔn nyinaa nhyia, na wonnyina hɔ. Ehu bɛka wɔn, na wɔn nyinaa ani bewu. 12 Ɔtomfo de dade to gya mu, na ɔde ne dade yɛ ho adwuma. Ɔde hamma* bɔ so,Ɔde ne basa a ahoɔden wom yɛ ho adwuma.+ Afei ɔkɔm de no, na n’ahoɔden so tew.Ɔnnom nsu, enti ɔbrɛ. 13 Duadwumfo twe susuhama, ɔde kyɔɔk kɔkɔɔ sensan dua ho. Ɔde ade sen, na ɔde kɔmpase sensan ho. Ɔyɛ no te sɛ onipa,+Sɛnea onipa ahoɔfɛ te,Sɛ ɛntena fie.*+ 14 Obi nso adwuma ne sɛ obebu sida nnua. Ɔhwehwɛ dua bi, odum,Na ɔma enyin wɔ kwae mu nnua mu.+ Odua osennuru, na osu tɔ gu so ma enyin. 15 Afei onipa de sɔ gya. Oyi bi tena ho ma ne ho yɛ no hyew;Ɔde bi sɔ gya de to paanoo. Na ɔde bi nso yɛ onyame som no. Ɔde yɛ ohoni, na ɔkotow n’anim.+ 16 Ɔde fã sɔ gya;Saa fã no, ɔde toto nam we mee. Afei ɔtena gya no ho ma ne ho yɛ no hyew, na ɔka sɛ: “Aa! Ogya a merehwɛ yi ama me ho ayɛ me hyew.” 17 Na ɔde nea aka no yɛ onyame, ɔde yɛ ne honi. Ɔkotow no, na ɔsom no. Ɔbɔ no mpae, na ɔka sɛ: “Gye me, efisɛ wone me nyame.”+ 18 Wonnim hwee, na wɔnte hwee ase,+Efisɛ wɔaka wɔn ani afomfam so na enhu ade,Na wɔn koma ntumi nte asɛm ase. 19 Obiara nnwen wɔ ne komam,Na obi nni nimdeɛ anaa nhumu a ɔbɛka sɛ: “Mede fã sɔɔ gya,Metoo paanoo wɔ ne nsramma so, na metotoo nam wɔ so wee. Memfa nea aka no nyɛ akyiwade anaa?+ Dua sin* na mensom no anaa?” 20 Odi nsõ. Ɔno ara ne koma daadaafo no ama wayera. Ontumi nnye ne ho,* na ontumi mmisa sɛ: “Enti ɛnyɛ atoro na ɛwɔ me nsa nifa mu yi?” 21 “Kae eyinom, O Yakob, ne wo, O Israel,Efisɛ woyɛ m’akoa. Me na meyɛɛ wo, na woyɛ m’akoa.+ O Israel, me werɛ remfi wo.+ 22 Mɛpopa wo mmarato te sɛ nea omununkum akata so,+Na mapopa wo bɔne te sɛ nea omununkum tumm akata so. San bra me nkyɛn, na megye wo.+ 23 Ɔsoro, munni ahurusi,Efisɛ Yehowa akeka ne ho! Asaase ase tɔnn, mommɔ ose! Mmepɔw, munni ahurusi,+Kwae ne emu nnua nyinaa! Efisɛ Yehowa agye Yakob,Na wada n’anuonyam adi wɔ Israel so.”+ 24 Nea Yehowa, wo Gyefo no,+Nea ɔnwenee wo bere a na wowɔ yafunu mu no, se ni: “Mene Yehowa, nea ɔyɛɛ nneɛma nyinaa. Me nko ara na metwee ɔsoro mu,+Na metrɛw asaase mu.+ Hena na na ɔka me ho? 25 Me na mesɛe wɔn a wɔka nsɛnhunu* no nsɛnkyerɛnne,Na me na mema wɔn a nkurɔfo kɔ wɔn nkyɛn abisa yɛ sɛ nkwaseafo;+Me na mema anyansafo adwene tu fra,Na mema wɔn nimdeɛ dan nkwaseasɛm;+ 26 Mene nea ɔma n’akoa asɛm yɛ nokware,Na ɔma wɔn a ɔsoma wɔn no nkɔmhyɛ ba mu korakora;+Nea ɔka fa Yerusalem ho sɛ, ‘Wɔbɛtena mu,’+ Ne Yuda nkurow ho sɛ, ‘Wɔbɛsan akyekye,+Na n’amamfo nso, mɛma asi ne dedaw mu’;+ 27 Me na meka kyerɛ nsu a emu dɔ sɛ, ‘Yow,Na mɛma wo nsubɔnten nyinaa ayoyow’;+ 28 Me na meka Kores+ ho asɛm sɛ, ‘Ɔyɛ me guanhwɛfo,Na ɔbɛyɛ nea mepɛ nyinaa akosi ase’;+Me na meka Yerusalem ho asɛm sɛ, ‘Wɔbɛsan akyekye,’ Ne asɔrefi no ho sɛ, ‘Wɔbɛto wo fapem.’”+
^ Anaa “awo mu.”
^ Ɛkyerɛ, “Nea Ɔteɛ.” Ɛyɛ abodin a wɔde maa Israel.
^ Anaa “asaase a osukɔm de no.”
^ Kyerɛ sɛ, ahoni no.
^ Anaa “honi a wɔagu.”
^ Anaa “abosomfi.”
^ Anaa “Duwui.”
^ Anaa “atoro adiyifo.”